Posted by Tranquillus | Jul 7, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Maalmahan, waxaan aragnaa in qorista kumbuyuutarradeedu ay ku sii badanayaan nolol maalmeedkeenna. Tani waxay badanaa naga dhigeysaa inaan illowno qoraalka gacmeedka, taas oo, in kasta oo lagu guuleysto tiknoolajiyada dijital ah, ay wali tahay mid waxtar leh weligeed Iyada oo tan la soo wajahay, waxaa muhiim ah in aad isweydiiso qaabkee loo qaadan karaa shaqada. Dulmarka guud ee farsamooyinkan.
Qoraalka gacanta: waxay lagama maarmaan u tahay barashada
Waa muhiim in la ogaado, gaar ahaan haddii aad qorsheyneyso inaad barato luqad cusub. In marinka qoraalka gacantu kuu soo kordhin doono. Xaqiiqdii, waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa higgaadintaada iyo akhriskaaga.
Intaa waxaa dheer, daraasado badan ayaa muujiyay in barashada qalinku kuu oggolaanayo inaad si fiican u maamusho jilayaasha kala duwan iyo sidoo kale dareenkooda. Sidaa darteed, cilmi baaris ku saleysan sawirka iyo neerfaha. Waxaa la ogaaday in qoraal gacmeedka uu dhaqaajinayo isla aagagga maskaxda ee saameeyay inta lagu guda jiray akhriska.
Taas oo macnaheedu yahay in qorista gacanta ay kuu oggolaaneyso inaad horumariso xirfadahaaga akhris. Sidaas darteed, waxaad awoodi doontaa inaad horumariso heerkaaga akhris iyo inaad si dhakhso leh wax u akhrido.
Markaad isticmaasho kiiboodhka, xusuusta dareeraha lama sii isticmaali doono. Tani waxay yareynaysaa xirfadahaaga akhriska xawaaraha.
Wax ku qorida kumbuyuutarka: qiime lagu daray
Dhinaca kale, xaqiiqda qorista gacanta halkii aad ka isticmaali lahayd kiiboodhka khasab kuma aha inay qiime ku kordhiso xagga tayada. Caddayntu waxay tahay in dad badani ka xirfad badan yihiin qorista qoraalka kumbuyuutarka marka loo eego nooca gacanta lagu qoro. Intaa waxaa sii dheer, qaar waxay tixgeliyaan in isticmaalka kumbuyuutarka shaqada uu u oggolaanayo iyaga inay soo saaraan qoraallo tayo wanaagsan leh.
READ Email template si aad uga jawaabto codsiga macluumaadka qof ka mid ah saaxiibka
Kumbuyuutarku wuxuu ku siinayaa dhowr qalab oo kuu oggolaanaya inaad ku habboonaan karto qoraalladaada xirfadeed. Natiijo ahaan, waxaad fursad u leedahay inaad ka fogaato khaladaadka naxwaha iyo waliba qaladaadka higgaadinta.
Intaa waxaa dheer, daraasadaha ayaa muujiyay in kumbuyuutarku uu saameyn ku leeyahay dhiirigelinta barashada qorista, gaar ahaan dadka sida xun wax u qora. Xaqiiqdii, kumbuyuutarka, waxaad ku qortaa adigoon ka walwalin qaabka qoraalka. Intaas waxaa sii dheer, looma baahna in laga walwalo khaladaadka maxaa yeelay waa la sixi karaa iyada oo aan la tirtirin. Dareenkan, waxaan ogaaneynaa in dib-u-eegista marka wax lagu qoro kumbuyuutarka si fudud loo sameeyo maaddaama ay jiraan qalab isku dhafan hawshan.
Ugu dambeynti, ma inaad wax ku qortaa gacanta ama kumbuyuutarka?
Barashada qoraalka farta ayaa muhiim u ah sida loo barto kumbuyuutarka. Xifdinta, waxaa iska cad in qoraalka farta lagu qoro ay tahay tan ugu faa iidada badan maadaama ay kuxirantahay aqriska.
Si kastaba ha noqotee, markay tahay shaqo maalmeedka, qorista kumbuyuutarka ayaa guuleysta. Sababta ayaa ah in kumbuyuutarku fududeeyo dhammaan ficilada la xiriira qorista: nuqul, dheji, goyn, masaxid, iwm. Faa'iidada kale ee habkani waa inay kuu oggolaato inaad ka dhakhso badan tahay qorista gacanta. Faa'iido weyn gaar ahaan jawiga xirfadeed.
Si fiican wax ugu qor shaqada: qalinka ama kiiboodhka? Oktoobar 15th, 2021Tranquillus
horeWax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato qorista istiraatiijiyadda shaqada
socda[DUGSIGA KU SOO CELI] - Isu diyaari inaad ku laabato shaqada hadda!